လင်ငယ်နဲ့ ပလူးနေတာကို လက်ပူးလက်ကြပ်ဖမ်းပြီး ရိုက်နှက်နေတဲ့ လင်ကြီး.. – အနုပညာရပျဝနျး
ဖောက်ပြန်တဲ့ ဇနီးကို လက်ပူးလက်ကြပ်ဖမ်းပြီး ပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့ လင်ကြီး….
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုထဲမှာ ကာမပိုင်လင်ရှိတဲ့ အမျိူးသမီးတစ်ယောက်ဟာ ချစ်သူ အမျိုးသားနဲ့အတူ လိင်ကိစ္စအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ လက်ရှိလင်ကြီးနဲ့ သူငယ်ချင်း ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ထောင်သည်တွေ ဖောက်ပြန်မှု မြင့်တက်လာခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
လင်ကြီးဖြစ်သူဟာ အဆိုပါ ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာ ၎င်း၏ဇနီးနဲ့ အခြားအမျိုးသားတစ်ယောက် ရှိနေတယ်ဆိုတာကို သ တင်းအတိအကျ ရထားပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းကို ဗွီဒီယိုကင်မရာကို ပြင်ဆင်စေကာ မှတ်တမ်းယူစေပါတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ တံခါးကို ရုတ်တရက် ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ နံရံကို အဝတ်ဗလာနဲ့ မှီရပ်နေတဲ့ လူစိမ်းအမျိုးသားကို တွေ့တာနဲ့ မျက်နှာ၊ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ခေါင်းကို လက်သီးနဲ့အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးကြိတ်ခဲ့ပါတယ်။
အမျိုးသမီးကလည်း ကုတင်ပေါ်မှာ ခြုံစောင်တစ်ခုကို အကာအကွယ်ယူကာ ပုံးအောင်းနေပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ လင် ဖြစ်သူက သူ့ဆီကို မြားဦးလှည့်ပြီး စောင်ကိုစွဲလှန်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာလည်း အမျိုးသမီးဟာ အဝတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ် ဖြစ်နေပြီး လင်ဖြစ်သူက မျက်နှာကို အချက်ပေါင်းများစွာ ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီဗွီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်မှုတွေ မြင့်တက်ခဲ့သလို ဖောက်ပြန်မှုတွေဟာ လူမှုရေးမှာ အရှက်ရစရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ လင် ဖြစ်သူရဲ့ ထိုးကြိတ် ရိုက်နှက်မှုဟာ ပြစ်ဒဏ်နဲ့ယှဉ်ရင် နည်းတောင်နည်းသေးကြောင်း၊ ထိုအမျိူးသမီးမှာ ဖမ်းမိတဲ့အခန်းထဲမှာ လင်ငယ်နဲ့ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်အထိ နှစ်ပါးသွားပြီးပြဆိုတာ ခန့်မှန်းရ ခက်ကြောင်း ဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဖောကျပွနျတဲ့ ဇနီးကို လကျပူးလကျကွပျဖမျးပွီး ပွငျးထနျစှာရိုကျနှကျခဲ့တဲ့ လငျကွီး….
တရုတျနိုငျငံရဲ့ ဟိုတယျအခနျးတဈခုထဲမှာ ကာမပိုငျလငျရှိတဲ့ အမြိူးသမီးတဈယောကျဟာ ခဈြသူ အမြိုးသားနဲ့အတူ လိငျကိစ်စအတှကျ ပွငျဆငျနခြေိနျမှာ လကျရှိလငျကွီးနဲ့ သူငယျခငျြး ရောကျရှိလာခဲ့ပွီး ဝိုငျးဝနျးရိုကျနှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒီဗှီဒီယိုဟာ တရုတျနိုငျငံရဲ့ အိမျထောငျသညျတှေ ဖောကျပွနျမှု မွငျ့တကျလာခွငျးကို မီးမောငျးထိုးပွထားတဲ့ ဗှီဒီယိုဖိုငျတှထေဲက တဈခုဖွဈပါတယျ။
လငျကွီးဖွဈသူဟာ အဆိုပါ ဟိုတယျအခနျးထဲမှာ ၎င်းငျး၏ဇနီးနဲ့ အခွားအမြိုးသားတဈယောကျ ရှိနတေယျဆိုတာကို သ တငျးအတိအကြ ရထားပုံရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးကို ဗှီဒီယိုကငျမရာကို ပွငျဆငျစကော မှတျတမျးယူစပေါတယျ။ အဲဒီနောကျမှာတော့ တံခါးကို ရုတျတရကျ ဖှငျ့လိုကျတဲ့အခါ နံရံကို အဝတျဗလာနဲ့ မှီရပျနတေဲ့ လူစိမျးအမြိုးသားကို တှတေ့ာနဲ့ မကျြနှာ၊ ဝမျးဗိုကျနဲ့ ခေါငျးကို လကျသီးနဲ့အခကျြပေါငျးမြားစှာ ထိုးကွိတျခဲ့ပါတယျ။
အမြိုးသမီးကလညျး ကုတငျပျေါမှာ ခွုံစောငျတဈခုကို အကာအကှယျယူကာ ပုံးအောငျးနပေမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ လငျ ဖွဈသူက သူ့ဆီကို မွားဦးလှညျ့ပွီး စောငျကိုစှဲလှနျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီအခါမှာလညျး အမြိုးသမီးဟာ အဝတျမဲ့ခန်ဓာကိုယျ ဖွဈနပွေီး လငျဖွဈသူက မကျြနှာကို အခကျြပေါငျးမြားစှာ ထိုးနှကျခဲ့ပါတယျ။
ဒီဗှီဒီယိုနဲ့ပတျသကျပွီး ဝဖေနျမှုတှေ မွငျ့တကျခဲ့သလို ဖောကျပွနျမှုတှဟော လူမှုရေးမှာ အရှကျရစရာဖွဈကွောငျးနဲ့ လငျ ဖွဈသူရဲ့ ထိုးကွိတျ ရိုကျနှကျမှုဟာ ပွဈဒဏျနဲ့ယှဉျရငျ နညျးတောငျနညျးသေးကွောငျး၊ ထိုအမြိူးသမီးမှာ ဖမျးမိတဲ့အခနျးထဲမှာ လငျငယျနဲ့ဘယျနှဈကွိမျလောကျအထိ နှဈပါးသှားပွီးပွဆိုတာ ခနျ့မှနျးရ ခကျကွောငျး ဝဖေနျခဲ့ကွပါတယျ။